सिन्धुलीका ९ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ५६ करोड भन्दा वढी बजेट विनियोजन, गत वर्ष भन्दा २८ करोड वढी - Sindhuli Khabar
सिन्धुलीका ९ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ५६ करोड भन्दा वढी बजेट विनियोजन, गत वर्ष भन्दा २८ करोड वढी
जेठ १६, सिन्धुली/ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सिन्धुलीका ९ स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो बजेट गत वर्षको भन्दा २८ करोड ८६ लाख बढी हो । गत वर्ष ३ अर्ब २७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा कमलामाई नगरपालिकालाई ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकम गत वर्ष भन्दा १ करोड ९१ लाख वढी हो । गत वर्ष कमलामाई नगरपालिकालाई सबै भन्दा वढी ६४ करोड ३४ लाख विनियोजन भएको थियो ।
त्यस्तै दुधौली नगरपालिकालाई ६० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकम पनि गत वर्षको भन्दा ६ करोड ३५ लाख वढी हो । गत वर्ष दुधौली नगरपालिकालाई ५४ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
तीनपाटन गाउँपालिकालाई ४९ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकम गत वर्षको भन्दा ५ करोड ३४ लाख वढी हो । गत वर्ष तीनपाटन गाउँपालिकालाई ४४ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सुनकोशी गाउँपालिकालाई ३५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकम गत वर्ष भन्दा २ करोड १८ लाख वढी हो । गत वर्ष सुनकोशी गाउँपालिकालाई ३२ करोड ९२ लाख विनियोजन भएको थियो ।
गोलञ्जोर गाउँपालिकालाई ३० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष भन्दा यस आ.व. मा १ करोड ४५ लाख वढी विनियोजन भएको छ । गत वर्ष गोलञ्जोर गाउँपालिकालाई २८ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । मरिण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष भन्दा यस आ.व. मा ३ करोड १९ लाख वढी विनियोजन भएको छ । गत वर्ष मरिण गाउँपालिकालाई २८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई ३१ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकम गत वर्ष भन्दा ३ करोड ४३ लाख वढी हो । गत वर्ष हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाललाई २७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । फिक्कल गाउँपालिकालाई २९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम गत वर्ष भन्दा १ करोड २५ लाख वढी हो । गत वर्ष फिक्कल गाउँपालिकालाई २७ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
घ्याङलेख गाउँपालिकालाई २२ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम गत वर्ष भन्दा ३ करोड ६६ लाख वढी हो । गत वर्ष घ्याङलेख गाउँपालिकालाई १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष पनि सबै भन्दा वढी कमलामाई नगरपालिकाले र सबै भन्दा कम घ्याङलेख गाउपालिकाले बजेट पाएका छन् ।
News Desk0response आइतवार, जेष्ठ १६, २०७८